Otu esi eche di na nwunye ihu nsogbu nke ọbịbịa nke nwa mbụ ha kpatara | Bezzia
Maria José Roldan | 12/01/2022 22:14 | Mmekọrịta
Ọbịbịa nke nwatakịrị na-eche mgbe niile mgbanwe dị ukwuu maka ndụ di na nwunye. N'amaghị ka esi ejikwa nke ọma, ọ ga-ekwe omume na ntọala nke mmekọrịta ahụ na-amalite ịgbawa n'ụzọ dị ize ndụ. Obi abụọ adịghị ya na ọmụmụ nwa bụ ule litmus maka ndị nne na nna.
Ịmara otú e si ejikwa ọnọdụ ọhụrụ ahụ nwere ike inye aka wusie mmekọrịta ahụ ike na inwe ike ịnụ ụtọ eziokwu nke ịmụ nwa. N’isiokwu na-eso nke a, anyị na-egosi gị ihe na-akpata ma ọ bụ ihe mere di na nwunye nwere ike ịda mbà tupu nwa mbụ ha abịa na ihe ha ga-eme iji dozie ya.
1 Nsogbu nke di na nwunye mgbe a mụsịrị nwa mbụ ha
2 Ihe na-akpata ọgba aghara na di na nwunye n'ihi ọbịbịa nke nwa
3 Ihe ị ga-eme iji zere oge nsogbu mgbe amuchara nwa mbụ
Nsogbu nke di na nwunye mgbe a mụsịrị nwa mbụ ha
Di na nwunye ọ bụla na-eche nsogbu nwere ike ihu n'ụzọ dị iche. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọgụ ma ọ bụ nkọcha na-ewere ọnọdụ mgbe nile, ebe n'ọnọdụ ndị ọzọ, a na-emepụta anya n'ụzọ mmetụta uche. Ọ bụrụ na ọ nwere ike, nke a adịghị mma maka mmekọrịta ahụ, na-eme ka mmebi dị ukwuu na ya.
Ọ bụrụ na ihe anaghị arụ ọrụ, O yikarịrị ka ahụ́ erughị ala ahụ e hotara n'elu ga-emesị mebie ezinụlọ dum ahụ n'ụzọ na-ezighị ezi. Iji zere nke a, ọ dị mkpa ịchọta ihe ndị na-eme ka ahụ erughị ala dị otú ahụ ma mee ka ụbụrụ ezinụlọ ghara imebi n'oge ọ bụla.
Ihe na-akpata ọgba aghara na di na nwunye n'ihi ọbịbịa nke nwa
Nke mbụ n'ime ihe kpatara ya na-abụkarị n'ihi akụkụ onwe onye nke ma nne na nna. N'ihe banyere nne, ekwesịrị ịmara na ahụ ya enweela mgbanwe dị mkpa yana ọnọdụ mmetụta uche ya. N'ihe banyere nna ibu ọrụ dị ukwuu karị, karịsịa ma a bịa n’ihe banyere ilekọta nwatakịrị.
Ihe ọzọ kpatara nsogbu ahụ nwere ike ịbụ n'ihi mgbanwe dị egwu na-eme kwa ụbọchị. Ịmụ nwa pụtara ịgbanwe ndụ gị kpamkpam ma lekwasị anya kpamkpam na ọdịmma nke nwa. Ndị nne na nna anaghị enwe oge maka onwe ha yana nwee ike ịkwụsị.
Otu n’ime ihe na-emekarị ka di na nwunye na-ese okwu mgbe ha mụrụ nwa mbụ ha bụ n’ihi ịrụkọ ọrụ ọnụ n’ụlọ. Ọtụtụ mgbe, ọ dịghị nha nha ma a bịa n'ịkekọrịta ọrụ dị iche iche n'ime ụlọ na Nke a na-ejedebe na esemokwu siri ike.
Obi abụọ adịghị ya na ilekọta nwa ọhụrụ na-aghọ ọrụ kacha mkpa n'ime di na nwunye ahụ. Nke a pụtara na oge di na nwunye ahụ agbadala nke ukwuu. Oge ụtọ nke di na nwunye ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam na nke a nwere mmetụta ọjọọ na ọdịnihu dị mma nke mmekọrịta ahụ.
Ihe ị ga-eme iji zere oge nsogbu mgbe amuchara nwa mbụ
Ọ dị mma na ndị nne na nna n'ọdịnihu na-agwa onwe ha tupu a mụọ nwa, ihe niile na-abịa na ịmụ nwa.
Ọ dị mma ịnọdụ ala, kparịta ụka wee malite ịhazi ọrụ dị iche iche ị ga-arụ ma a mụọ nwa gị. Ọ bụ ụzọ dị irè isi zere esemokwu na ọgụ nwere ike ime.
Ọ dị mkpa na nne na nna ọ bụla nwere oge n'efu, iji nwee ike ịpụpụ njikọ maka nkeji ole na ole site na ọrụ nke ilekọta nwa.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ dị mma ịrịọ ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ maka enyemaka. Mgbe ụfọdụ, enyemaka dị otú ahụ dị mkpa iji zere ọnọdụ nrụgide ma ọ bụ nchekasị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Otu esi esi nagide di na nwunye nsogbu ọbịbịa nke nwa mbụ ha kpatara